ဖက်ရှင် | ဇန္နဝါရီလ 2022
လက်ဝတ်ရတနာများသာ: ဒီဇိုင်နာ Jennifer Fisher သည်လက်ဝတ်ရတနာများသိုလှောင်ရန်လှည့်ကွက်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးရန်နှင့်သင်၏အသွင်အပြင်ကိုနေ့မှညသို့အသွင်ပြောင်းသည်။
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: ဖက်ရှင်
Just Jewelry ၏ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူမသည်မတော်တဆမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်ဟုပြောသောယခင် stylist ၏နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ကွယ်မှရှိသည်။
စိန်များသည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုကာရက်အစုံများနှင့်ပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းများသည်ကြောက်စရာကောင်းသည်။
ပြည်တွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ပြောဖို့မထိုက်တန်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသူနဲ့သူ့ရဲ့လှည့်လည်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ကိုလန်းဆန်းအောင်ငါအားလပ်ရက်ဝိညာဉ်နဲ့ထူးထူးခြားခြားလွှမ်းမိုးနေတယ်။ ငါကြာသပတေးနေ့က LA ကိုနှစ်စဉ်အိမ်ပြန်တာကိုငါမျှော်လင့်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ငါအရင်ကထက်အိမ်နဲ့ပိုဝေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမွေးစားခဲ့တဲ့ Parisians တွေအကြားမှာခရစ်စမတ်အလှဆင်မှုတွေနဲ့ချစ်စရာမိသားစုလေးတွေကသူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေပုံရတယ်။ နေ့ မသင့်လျော်သောအပျော်တမ်းမနုဿဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး ဦး အား ဦး ထုပ်ပေါ်ပစ်ချခြင်း၊ ငါဒီမိသားစုတွေကခြားနားသလား။ သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်ကငါတို့နဲ့မတူဘူးလား။ သင်သွားမည့်နေရာပေါ်မူတည်သည်။ မာယာ (ငါ့ရဲ့အရမ်းချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ၁၀ နှစ်အရွယ်သမီး) ကိုသတိရတဲ့သူတွေအတွက်မင်းက Marais, 3rd arrondissement မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ hipster ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာနေထိုင်တယ်။ သူမရဲ့ groovy အပိုင်း Paris မှာ Christmas ကဘယ်လိုပုံစံလဲ။ ခေတ်မှီဖေဖေသည်တကယ်ကိုဂရုတစိုက်မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ၏ဇီဇာကြောင်သောနှစ်နှစ်သားလုံးနှင့်အတူကစားသည်။ ငါသူတို့ကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ဘူး၊ ငါတွေးခဲ့တဲ့အတွေးများစွာထဲမှာဖက်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တစ်ခုကဒါကငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကခေတ်စားနေတဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ ငါ့လူတွေချည်းဘဲ
စျေးကွက်မှာအလန်းဆုံး၊ အလန်းဆုံး၊ အချိုမြိန်ဆုံး၊ အချိုမြိန်ဆုံးနဲ့အလှပဆုံးအားလပ်ရက်လက်ဆောင်တွေကိုငါတို့စုဆောင်းပြီးပြီ။ ပေးကမ်းရအောင်။
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကုန်ကငါ့ဗီဒို၏ခြောက်ထပ်နှင့်အဝတ်များပြည့်နေသောခြောက်ပေရှည်သံဆွဲကြိုးသည်ငါ့နံရံမှအလိုအလျောက်ပြုတ်ကျသွားသည်။ စတိုင်နတ်ဘုရားတွေကငါ့ကိုတစ်ခုခုပြောဖို့ကြိုးစားနေတာလား။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကအဝတ်အစားတည်းဖြတ်မှုအတွက်ငါအချိန်တော်တော်ကြာကြာစောင့်ခဲ့ရတယ်။ ငါတို့က Glamour မှာလုပ်သလိုမျိုး၊ ဒီအတိုင်းဘဲ၊ အရေးပါတဲ့မျက်လုံး၊ သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး၊ နှစ် ဦး စလုံးနဲ့တူတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ Halloween တွင်သင် ၀ တ်ဆင်ထားသော polyester jumpsuit ၀ တ်ထားသောယုံကြည်ရသောအဖော်တစ် ဦး ၏အကူအညီကိုငါအလွန်ထောက်ခံလိုသည်။ လွန်ခဲ့သောရာသီများကတောက်ပသောဂျင်း ၄၃၁ အတွဲအတွက်ငွေသားအနည်းငယ်ရယူပါ။ မင်းဗီဒိုတွေပြည့်လျှံနေတာကိုမင်းဘယ်လိုကိုင်တွယ်လဲ။
စကား ၅ လုံးသို့မဟုတ်နည်း။ ဂျော့ခ်ျလူးကပ်စ်သည် Dakota Fanning ကို Rodarte တွင် ____ Front Row ကိုပြောပြသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဖက်ရှင်စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါ့အလုပ်မှာငါရိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်း၊ မနေ့က George Rod က Rodarte show မှာရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် Star Wars ဒါရိုက်တာ အိုး၊ Dakota Fanning လည်းဒီလိုပါပဲ။ ဒါဆိုဒီစုံတွဲဘာဆွေးနွေးခဲ့လဲ။ ချစ်တို့၊ ဒါမင်းစိတ်ကူးယဉ်တဲ့အရာပဲ ...
ကြိုးစားရကျိုးနပ်သောဂန္တ ၀ င်အစဉ်အမြဲ: Chic-ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ပူစပ်သောစကတ်
ဝတ်ဆင်နိုင်သော pastel များနှင့် oxfords အသစ်များနှင့်အတူလှပသောအင်္ကျီအစများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နွေ ဦး ပြေးလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီရာသီရဲ့ခေတ်စားနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ pleated စကတ်တွေကတကယ့်ဂန္တ ၀ င်ပါ။
Emma Stone ၏ Cover-Shoot ဓာတ်ပုံပြခန်း
Emma Stone မီးလောင်နေသည်ဟုပြောခြင်းသည်အထင်သေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည်အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးပြီးယခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်လေးကား (နှင့်နောက်နှစ် The Amazing Spider-Man) ၌ဆံပင်ရွှေရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ကဲ့သို့တူညီစွာဆူညံနေသည်။
ဒေါ်လာ ၅၀ နှင့်အောက်၊ အတွင်းခံပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုကြေငြာချက်
ခြေဖဝါးကိုမထိန်းနိုင်ဘဲ VPL ကိုရှောင်ဖို့ယောက်ျားလေးဘောင်းဘီတိုကိုပြောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံး၊ မင်းရဲ့ခြေထောက်ကအစကအရမ်းတင်းကျပ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းရဲ့ပေါင်ကိုညှစ်လိုက်သလိုဘဲ၊ gerbil တစ် ဦး ဒါကိုငါတို့အားလုံးမြင်နိုင်တယ်။ နာကျင်စရာကောင်းတယ်။ (ငါဒီနေ့မြေအောက်ရထားပေါ်မှာအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောနေတယ်။ ) အများကြီးပိုကောင်းလား။ ဤချစ်စရာကောင်းသောကဲ့သို့ဆွဲဆန့ ်၍ ကျယ်သောခြေထောက်နှင့်အတူပေါ့ပါးသောတစ်စုံနှင့်ပေါ့ပါးသည်။ ပန်းရောင်ကျားသစ်နှလုံးသားကောင်လေးလက်တို၊ ဒေါ်လာ ၄.၅၀ ကို wetseal.com တွင်ရနိုင်သည်
Man-Candy သတိပေးချက်။ New York Fashion Week, Fall 2012 မှအကျော်ကြားဆုံးအမျိုးသားမော်ဒယ်များ
Fashion Week သည်မိန်းကလေးများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ New York Fashion Week ရဲ့ fall menswear ရှိုးပွဲတစ်ပွဲမှာငါတို့တွေကချစ်စရာအကောင်းဆုံးအမျိုးသားမော်ဒယ်အချို့ရဲ့နောက်ကွယ်ကမြင်ကွင်းများကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Jane Birkin & Lou Doillon: ခေတ်သစ်မိသားစု
ဒဏ္aryာရီလာဗြိတိသျှတေးဂီတနှင့်အဆိုတော် Jane Birkin (ဟုတ်သည်၊ Birkin အိတ်ဟုနာမည်ပေးထားသည်) နှင့်သူမ၏ပြင်သစ်မင်းသမီးမော်ဒယ် Lou Doillon တို့ကသူတို့ဝတ်ထားသောအရာအားလုံးကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်စေသည်။ သူတို့၏လွယ်ကူ။ ခေတ်ဆန်သည့်စတိုင်လ်ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ပါ။ Bruce Weber ၏ဓာတ်ပုံများ
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်၏အကောင်းဆုံးဖက်ရှင် Trend ၁၀ ခု
မဟုတ်ဘူး၊ ဒီဆယ်စုနှစ်ရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကလူတွေခန့်မှန်းခဲ့သလိုအာကာသဝတ်စုံတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီနေရာမှာ ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၁၀ အထိအကြီးမားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုစုစည်းဖော်ပြပါ။ အဲဒါတွေကိုမင်းချစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်။
ဘရာစီယာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လအနည်းငယ်အကြာမှာသူတို့ကိုထုတ်ပစ်သင့်တယ်၊ ဘောင်းဘီအတွက်အတူတူပဲဆိုတာငါကြားဖူးတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ (လက်နဲ့စက်မှာ) ဘယ်လိုလျှော်လဲ၊ အခြောက်ခံတာတို့၊ အခြောက်ခံစက်တို့တို့တို့တို့တို့အပေါ်မှာမူတည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကငါ့လက်အောက်ခံတွေကိုလက်နဲ့လျှော်တာဟုတ်ရဲ့လား။ ဘယ်ရမလဲငါမလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတော်တော်လေးပုံမှန် update လုပ်ရမယ်လို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ငါ့ရဲ့အတွင်းခံတွေ (အနီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အမည်းရောင်တွေလိုပဲ) ငါ့အတွင်းခံတွေဆီကိုရောက်လာတဲ့အခါအံဆွဲကအဲဒါကအခြေခံမရှိတာဘဲ၊ ဒါပဲ။ အရင်းအမြစ်: Pinterest ရှိ Body Lingerie မှတဆင့် more-more.tumblr.com မှတဆင့်သင်အမျိုးသမီးများကောမည်သို့နည်း။ အတွင်းခံဝယ်သလား။ မကြာခဏဘယ်လောက်? နှစ်လတိုင်း? အထူးအခါသမယတွေမှာသာလား။ ပြီးတော့သင်ဘာကို ၀ ယ်လေ့ရှိလဲ။ ငါစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါကြောင့် comment နဲ့ဟင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Facebook အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ Karen Walker နေကာမျက်မှန်တစ်လက်ရရှိရန် ၀ င်ပါ။
နောက်ထပ်အပတ်၊ Glamour Facebook စာမျက်နှာတွင်ပျော်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုအနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းအတွက် ၀ င်ရောက်ရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်း။ e-commerce site Les Nouvelles ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခုချိန်မှာငါတို့မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိသင့်တယ်၊ အခုမင်း e-commerce site Les Nouvelles ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။
ငါမနေ့ညက Jared Leto နဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်
မင်းအသက် ၉၀ နားကဘယ်နေရာမှာမဆို၊ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေ၊ Doc Martens တွေ၊ မပြည့်စုံတဲ့အချစ်နဲ့အလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့မိဘတွေရှိနေခဲ့ရင်မင်း So My Called Life ထဲက Jordan Catalano ကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းမိလိမ့်မယ်။ ငါအစွဲအလမ်းမကြီးဘူး၊ ဒါကြောင့်မနေ့ညမှာသူကငါ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ငါ ၁၄ နှစ်သားဖြစ်လာပြီးအခြေခံအားဖြင့်အရည်ပျော်သွားတယ်။
မီးခိုးရောင်အရိပ်ငါးဆယ်ကိုမေ့လိုက်ပါ၊ မိုနာကိုအပြာရောင်သည်ဤနွေ ဦး အကြောင်းပြောခြင်းကိုသင်မရပ်တန့်နိုင်သောအရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Denim Essentials ငါးမျိုး
ထိပ်တန်းဂျင်းစတိုင်လ် ၅ ခုကိုလမ်းညွှန်ပါ။
Valentine's Day မှာဘာ ၀ တ်ဝတ်ရမယ်ဆိုတာ ၀ တ်စရာမလိုဘူး
မင်းအချစ်ရည်းစားနဲ့အပြင်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေနဲ့ဝီစကီအများကြီးသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုခိုးယူသွားမယ့်စတိုင်လ် ၁၀ ချက်ကဒီလိုပါ။
လှပသော Jenny Packham ၀ တ်စုံ ၆ ခုသည်မင်းသမီးအတွက်သင့်တော်သည်။
ဗြိတိန်ဒီဇိုင်နာ Jenny Packham သည် Duchess of Cambridge of Kate Middleton နေရာတိုင်း၌သူမ၏အဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်တွင်ရုတ်တရက်အိမ်ထောင်စုနာမည်တစ်ခုရုတ်တရက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက် Jenny Packham သည် New York's Mercedes Benz Fashion Week တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီစုဆောင်းမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤပြပွဲမှကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး ၀ တ်စုံခြောက်စုံမှာ၎င်းတို့သည်အလွန်လှပသည်။ HRH Kate ကဘယ်သူတွေဝတ်မယ်လို့မင်းထင်လဲ။
အကောင်းဆုံး plus size အဝတ်အစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ